Xogta Doorka Jidka Tooska ah ee Iibsashada | Martech Zone
Khamiis, Juun 5, 2014 Douglas Karr
Waxaa jira daraasiin dhibcood oo ku saabsan wadada si loo iibsado halka tafaariiqleyda ay ka ururin karaan oo ay u isticmaali karaan xogta si kor loogu qaado waayo-aragnimada wax iibsiga isla markaana loogu beddelo daalacayaasha iibsadeyaasha. Laakiin waxaa jira xog aad u fara badan oo sahlanaan karta in diiradda la saaro waxyaalaha qaldan lagana leexiyo wadada. Tusaale ahaan, 21% macaamiisha ayaa ka tagaya gaadhigooda si fudud maxaa yeelay nidaamka lacag bixinta ayaa ah aan waxtar lahayn.
Jidka wax lagu iibsado wuxuu leeyahay daraasiin qodob oo tafaariiqlayaashu ay ka soo ururin karaan xog qiimo leh, kor ugu qaadayaan khibradda wax u iibsiga, una beddelaan daalacayaasha iibsadayaasha. Laakiin iska jir: mugga xogta ayaa noqon kara mid xad dhaaf ah, waana sahlan tahay in laga leexdo wadada. Iyagoo ka fogaanaya "macluumaadka hareeraha", dukaamada tafaariiqdu waxay diiradda saari karaan xogta waxqabadka leh si ay macaamiisha ugu kaxeeyaan khadka dhammaadka.
Xigasho sii daayay infographic Xogta Doorka Jidka Tooska ah ee Iibsiga iyadoo la siinayo aragti ku saabsan xogta ugu muhiimsan uguna ficilka badan iyo hareeraha u horseedi kara dukaamada tafaariiqleyda.
Tags: baxsiBaadhidDatadaahfurkaujeeddowadada loo iibsadodhaqanka iibsigaiibso xogtaku celi iibsigacilmi
Sida loogu xayeysiiyo Pinterest